Home Test Practice Learning Fun Zone Translate Educenter Others
Soe Thinzar Htet
ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာ ဘာကိုတွေးရမယ်လို့ မသင်ကြားပေးပဲ ဘယ်လိုတွေးရမယ်ဆိုတာကို သင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်။
children (noun) - ကလေးငယ်များ
teach (verb) - သင်ကြားပေးသည်
how (adv) - ဘယ်လို၊ ဘယ်ပုံ၊ ဘယ်နည်း
think (verb) - တွေးသည်
what (pronoun) - ဘယ်အရာ
Children must be taught how to think, not what to think. ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာ ဘာကိုတွေးရမယ်လို့ မသင်ကြားပေးပဲ ဘယ်လိုတွေးရမယ်ဆိုတာကို သင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်။ Margaret Mead children (noun) - ကလေးငယ်များ teach (verb) - သင်ကြားပေးသည် how (adv) - ဘယ်လို၊ ဘယ်ပုံ၊ ဘယ်နည်း think (verb) - တွေးသည် what (pronoun) - ဘယ်အရာ
Different Language, Different Vision
A different language isadifferent vision of life. မတူညီတဲ့ ဘာသာစကားက မတူညီတဲ့ ဘ၀အမြင်ကို ပေးနိုင်တယ်။ Federico Fellini different (adjective) - ကွဲပြားခြားနားသော vision (noun) - အမြင်
Stop being afraid of what could go wrong and start being excited about what could go right. ဘယ်လိုတွေမှားသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်ကို ဖျောက်လိုက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုတွေမှန်လာနိုင်တယ်ဆိိုတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို စတင်မွေးလိုက်ပါ။ Tony Robbins afraid (verb) - ကြောက်သည် wrong (adjective) - မှားသော excited (verb) - စိတ်လှုပ်ရှားသည် right (adjective) - မှန်သော
There are two educations
There are two educations. One should teach us how to makealiving and the other how to live. ပညာရေးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ခုက အသက်မွေး၀မ်းကြောင်းဘယ်လိုပြုရမယ်ဆိုတာ သင်ကြားပေးပြီးတော့ တစ်ခုက ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ သင်ကြားပေးပါတယ်။ - John Adams education (noun) - ပညာရေး teach (verb) - သင်ကြားသည် living (noun) - အသက်မွေး၀မ်းကြောင်း live (verb) - ရှင်သန်နေထိုင်သည်
I walk slowly. But I never walk backward. ငါဖြည်းဖြည်းလေးပဲလျှောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မလျှောက်ဘူး။ Abraham Lincoln walk (verb) - လမ်းလျှောက်သည် never (adverb) - ဘယ်သောအခါမှ၊ ဘယ်တုန်းကမှ backward (adjective) - နောက်ပြန်၊ နောက်သို့ပြန်သွားသော
Stay away from negative people. They haveaproblem for every solution. မကောင်းမြင်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့ ေ၀းေ၀းမှာနေပါ။ သူတို့ဆီမှာ မင်းရဲ့ ဖြေရှင်းချက်တိုင်းအတွက် ပြဿနာတွေ ရှိတယ်။ Albert Einstein negative (adjective) - ငြင်းပယ်သော၊ ဆန့်ကျင်သော၊ အပျက်သဘောဆောင်သော problem (noun) - ပြဿနာ solution (noun) - ဖြေရှင်းချက်
The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. ပညာရေးရဲ့ အမြစ်တွေက ခါးပေမယ့် အသီးအပွင့်တွေကတော့ ချိုပါတယ်။ -Aristotle root (noun) - အမြစ် bitter (adjective) - ခါးသော fruit (noun) - အသီး sweet (adjective) - ချိုသော
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ပညာရေးဆိုတာက လောကကြီးကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းထက်ဆုံး လက်နက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ Nelson Mandela education (noun) - ပညာရေး powerful (adjective) - အစွမ်းထက်သော weapon (noun) - လက်နက် change (verb) - ပြောင်းလဲသည် world (noun) ကမ္ဘာ၊ လောက
When educating the minds
When educating the minds of our youth, we must not forget to educate their hearts. ကျုပ်တို့က လူငယ်တွေရဲ့ အသိဉာဏ်တွေကို ပညာသင်ပေးတဲ့အခါမှာ သူတို့လေးတွေရဲ့ နှလုံးရည်စိတ်ဓာတ်ကိုပါ သင်ကြားပေးဖို့ မမေ့သင့်ဘူး။ Dalai Lama educate (verb) - ပညာသင်သည်၊ သင်ပေးသည်၊ ပညာပေးသည် mind (noun) - စိတ်၊ ဉာဏ် youth (noun) - လူငယ် forget (verb) - မေ့သည် heart (noun) - နှလုံးသား
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. အတိတ်ကနေသင်ယူပါ၊ ပစ္စုပ္ပန်မှာရှင်သန်ပါ၊ အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ထားပါ။ - Albert Einstein learn (verb) - သင်ယူသည် live (verb) - ရှင်သန်သည်၊ နေထိုင်သည် hope (verb) - မျှော်လင့်သည်
©2020 MyanLearn.org All rights reserved.